Izimvo ngebhokisi yoMkhosi woMkhosi - Iiprojekthi
Iingcamango zeBhokisi yeSithunzi soMkhosi
Ibhokisi yezithunzi yindlela entle yokubonisa izinto ezininzi ezinemilinganiselo emithathu eza nenkonzo yezomkhosi. Ukusuka kwiiyunifomu ukuya kwiimedali, ezi zinto zixelela ibali elibalulekileyo malunga nenxalenye ehloniphekileyo yakho okanye eyadlulayo yosapho. Konke oku kuthatha kukuyila okuncinci kunye nexesha elithile lokuba ubanike ingxelo abayifaneleyo.
Iingcamango ezisixhenxe zeebhokisi zomkhosi oMkhosi
Ubume kunye nobukhulu bebhokisi yakho yezithunzi ziya kwahluka, kuxhomekeke kwisebe lenkonzo kunye nezinto ofuna ukuzibandakanya. Ungathenga kwaye uguqule ibhokisi yethunzi esele yenziwe ukuze wenze umboniso ofanelekileyo wezinto zakho.
Iifayile zeShadow zeenwele
Ukugcina ubucwebe bebhokisi yesithunzi: Iingcinga zokuthenga kunye ne-DIY
Iingcamango zobuchule zeZipho zoMhlala-phantsi zomkhosi
I-Shadow Box yokuHlonipha iGqala
Hlonipha umhlobo okanye ilungu losapho elithe lasebenza ilizwe lalo ngokwenza ibhokisi yesithunzi esiqhelekileyo njengesipho. Ungabandakanya iimedali, iifoto, izixhobo, iinxalenye zeyunifomu, iithegi zenja, kunye nezinye izikhumbuzo ezibalulekileyo.
Olunye uluvo kukusebenzisa imephu yendawo apho igqala lisebenza khona njengemvelaphi yebhokisi yesithunzi. Unokulayida ngasemva kwebhokisi ngale mephu emva koko ubeke ezinye izinto eziphambi kwayo. Oku kubonelela ngenkangeleko ecekeceke kwaye kunika indawo ebalulekileyo kulo mboniso.
I-Shadow Box yaBantu abaNinzi beeNkonzo
Inkonzo yezomkhosi sisiko elibalulekileyo kwiintsapho ezininzi, kunye namalungu osapho aliqela asebenza kwelinye okanye ngaphezulu kwisebe. Ungalihlonipha eli siko losapho ngokubonisa izinto zabantu abaninzi. Isitshixo kukuqinisekisa ukuba ilungu ngalinye losapho linecandelo lalo ekubonisweni.
Thenga ibhokisi yesithunzi ende yale projekthi kwaye usike iziqwenga ezincinci zomthi ukwahlulahlula ngokwamacandelo. Sebenzisa iglu yokhuni ukuncamathisela ukwahlula kwisakhelo sebhokisi ekhoyo. Kwicandelo ngalinye, bonisa ifoto yelungu losapho. Apha ngezantsi okanye ujikeleze ifoto, yongeza iimedali, iipatches kunye nezinye izinto ezibalulekileyo.
Ezinye iintsapho zinamalungu enkonzo kumasebe amaninzi omkhosi. Ukuba oku kuyenzeka kusapho lwakho, sebenzisa uphawu lwelungu kunye nefoto ukwahlula icandelo ngalinye. Ngomnxeba owongeziweyo, phrinta i-motto yesebe ngalinye lomkhosi kwaye ulongeze kwelo candelo lebhokisi yesithunzi.
Ibhokisi yeSithunzi yeMbasa
Iimbasa ziyinxalenye ebaluleke kakhulu kuyo nayiphi na ibhokisi yezomkhosi, kwaye ungazenza indawo ekugxilwe kuyo ngumboniso wakho. Kuxhomekeka kwinani leembasa ozibandakanyayo, ibhokisi ngokwayo inokuba ncinane okanye iphakathi ngokomlinganiselo. Oku kwenza ukuba kube lula ukubonisa ibhokisi egqityiweyo kulo naluphi na udonga okanye umphezulu ekhayeni lakho.
Umbono omnye omkhulu wolu hlobo lwebhokisi yesithunzi kukusebenzisa ifoto ukumisa umboniso kunye nokongeza ukubamba kwakho. Emva koko bonisa iimedali kwimiqolo macala omfanekiso. Gcina imvelaphi ilula kakhulu, usebenzisa ilaphu elimnyama okanye eli-navy eliluhlaza ukunceda iindondo zigqame.
I-Uniform Shadow Box
Iyunifomu yokunxiba yenye yezona zinto zibalulekileyo zenkonzo yasemkhosini, kwaye yinto entle ukuba iboniswe kwibhokisi yesithunzi. Ukuthintela iyunifomu ukuba iphele ngelixa iboniswa sebenzisa ifilimu ekhusela i-UV, enje Amaphepha e-GAM UV , ngasemva kweglasi kwimeko yakho.
Olu hlobo lomboniso, beka iyunifomu ngendlela ongathanda ukuyibonisa ngayo. Emva koko ulinganise ubungakanani besiboniso kwaye uthenge ityala lakho ngokufanelekileyo. Kwisiboniso esincinci, ungasonga ibhatyi efanayo ngesiqingatha ubude. Oku kukuvumela ukuba ubonise isiqwenga ngaphandle kokuthatha igumbi elininzi kakhulu. Kuquka ifoto yelungu lenkonzo elinxibe iyunifomu yalo longeza ubungakanani kolu hlobo lomboniso.
I-Shadow Box yeMbali yoMbutho Wezomkhosi
Ukuba icandelo lembali yosapho lwakho libandakanya inkonzo yasemkhosini, unokugcina kwaye ubonise izikhumbuzo kunye neefoto kwibhokisi yesithunzi. Oku kwenza indawo ephambili ekuhlanganiseni usapho okanye ngaphezulu kwedesika yomnombo wokuzalwa.
Qala ngokuqokelela izinto ongathanda ukuzibonisa. Oku kunokubandakanya iifoto, iileta, iimephu, iijenali, ukubhaliswa kunye nokukhutshwa kwamaphepha, izixhobo, iimedali, iinxalenye zeeyunifomu nezinye izinto. Khetha into ephambili, enjengefoto yokhokho wakho enxibe iyunifom, emva koko uyijikeleze ngamanye amaqhekeza owenzayo. Kwimvelaphi, khetha into eqaqambisa ubudala bezi zinto. Indwangu ebomvu ye-sepia yinto efanelekileyo.
Ibhokisi yeSikhumbuzo seShadow
Ibhokisi yesithunzi yindlela echukumisayo yokuhlonipha inkumbulo kunye nokuzincama kwejoni eliwileyo. Indawo ephambili yolu hlobo lwebhokisi inokuba yiflegi ethiwe thaca emngcwabeni welungu lenkonzo okanye kwinkonzo yesikhumbuzo. Faka iifoto, iimedali, kunye nezinye izikhumbuzo ezibalulekileyo.
Unokwenza icandelo elahlukileyo letyala ukubamba iflegi esongiweyo. Khetha ngokulula isiqwenga somthi esifana nohlobo kunye nombala kwibhokisi ethengiweyo. Emva koko sebenzisa ibhokisi ye-miter ukusika iziphelo zesahlulo kwii-angles ezingama-45 kwaye unamathisele ngeglue yokhuni. Bonisa iflegi kwicandelo elingunxantathu kunye nezinye izikhumbuzo ezikufutshane nayo.
I-Shadow Box yeeleta zasekhaya
Nokuba wenza ibhokisi yesithunzi kwimbali yosapho lomkhosi okanye ufuna ukugcina nokubonisa izikhumbuzo zomntu okhonza ngoku, iileta zasekhaya zinokuba ngumxholo wokuyila.
Ukwenza oku, thenga ibhokisi encinci, enesithunzi. Yiya ngoonobumba ukuze ufumane amabinzana ambalwa abalulekileyo kwaye usebenzise iskena kunye neprinta ukuze wandise ezo ndawo zoonobumba. Ziprinte ngaphandle kwaye uzincamathisele ngasemva kwebhokisi, ngaphezulu kwemiphetho ukwenza imvelaphi. Bopha oonobumba kwiinyanda ngeribhoni enemibala kwaye uyame ngasemva kwebhokisi. Ukuba kunokwenzeka, faka nefoto yomntu obhalayo, kunye nosiba okanye ipensile.
Iingcebiso ngeeBhokisi eziShadayo
Kukho ubugcisa bokukhetha izinto oza kuzifaka kwibhokisi yesithunzi. Gcina ezi ngcebiso engqondweni ngokwenza umboniso ofanelekileyo wezikhumbuzo zomkhosi:
Khetha ugxininiso kwibhokisi yakho. Kulula ukubeka iqela lezinto kumboniso, kodwa ukuba ukhetha into ekhethekileyo njengendawo ekugxilwe kuyo, iziphumo ziya kuba namandla ngakumbi. Cinga ngomfanekiso, iyunifomu, imbasa, okanye enye into ebalulekileyo.
Hlela izinto ozikhethileyo. Inkonzo yasemkhosini iza neememos ezininzi, kwaye ngekhe ubabandakanye bonke ngaphandle kokwenza umntu abukele umboniso. Khetha kuphela izinto ezibalulekileyo.
Khetha imvelaphi engafaniyo nezinto ozibonisayo okanye ezihambelana nomxholo wakho. Imvelaphi inokubuyela kumbono kwaye ibangele izinto ezibonisiweyo ukuba zivelise ngenene, okanye inokuba yinxalenye yomboniso ngokwawo.
Ukuba uya kuxhoma ibhokisi yesithunzi kwindawo efumana ukukhanya okuninzi kwendalo, jonga ifilimu yokukhusela i-UV yeglasi. Ukukhanya kwelanga kungonakalisa iphepha, iifoto kunye namalaphu.
Ngokufanayo, cinga ukusebenzisa izinto ezikhuselekileyo zokufota kunye neasidi xa usenza ibhokisi yesithunzi. Ezi zinto zenzelwe ukuba zingazisi iikhemikhali ezinokonakalisa izinto ezizodwa.
Hlonipha umntu oye wakhonza
Nokuba ungawuphi umxholo okanye ugxile kwibhokisi yesithunzi somkhosi, le yeyona ndlela ilungileyo yokuhlonipha umntu oye wakhonza ilizwe lakhe. Ikwayindlela elungileyo yokugcina nokubonisa izikhumbuzo ezibalulekileyo zale nkonzo.
Ukulawula Your Credit Zomatshini Industry Ikrisimesi Izipho Uqhawulo-Mtshato Amagqwetha Ezishicilelweyo Ne Coloring Pages
Ukugonyelwa amarabi ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga
uhlamba njani abamhlophe ngeblitshi
uyifaka njani eyeliner kwisiciko esisezantsi
zingaphi iikhabhathi kwiglasi yepinot grigio
izinto zokuthetha ngexesha lobuso
esona siseko sefoto kunye nefleshi
yintoni eyona capricorn ifanelekileyo